Saved name:	 သိမ်းဆည်းထားသော အမည် -	 Details
သိမ်းဆည်းထားသော အမည် -
2020-10-12 17:15:48 GMT
Security question:	 လုံးခြုံရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်း	 Details
This question is mandatory	 ဤမေးခွန်းမှာ မဖြစ်မနေဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်	 Details
ဤမေးခွန်းမှာ မဖြစ်မနေဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်
To remain anonymous please useapseudonym as your username, also an email address is not required.	 အမည်ရင်းမဖေါ်ပြဘဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် ဖြေဆိုသူနေရာတွင် အမည်လွှဲပြီးဖြည့်သွင်းပါ။ အီးမေးလ် လိပ်စာလည်း မလိုအပ်ပါ။	 Details
To remain anonymous please useapseudonym as your username, also an email address is not required.
အမည်ရင်းမဖေါ်ပြဘဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် ဖြေဆိုသူနေရာတွင် အမည်လွှဲပြီးဖြည့်သွင်းပါ။ အီးမေးလ် လိပ်စာလည်း မလိုအပ်ပါ။
Type in the 'name' you used to save the survey, and the password.	 အမည် နေရာတွင် သင်သိမ်းဆည်းခဲ့သော နာမည်နှင့် စကားဝှက်တို့ကို ထည့်သွင်းပါ။	 Details
Type in the 'name' you used to save the survey, and the password.
အမည် နေရာတွင် သင်သိမ်းဆည်းခဲ့သော နာမည်နှင့် စကားဝှက်တို့ကို ထည့်သွင်းပါ။
You can loadasurvey that you have previously saved from this screen.	 ဤနေရာတွင် သင်ယခင်သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် စစ်တမ်းဖြေဆိုခြင်းအား ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။	 Details
You can loadasurvey that you have previously saved from this screen.
ဤနေရာတွင် သင်ယခင်သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် စစ်တမ်းဖြေဆိုခြင်းအား ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။
Your survey was successfully saved.	 သင်၏ စစ်တမ်းဖြေဆိုမှုအား အောင်မြင်စွာ သိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ။	 Details
Your survey was successfully saved.
သင်၏ စစ်တမ်းဖြေဆိုမှုအား အောင်မြင်စွာ သိမ်းဆည်းပြီးပါပြီ။
Your survey will be saved using that name and password, and can be completed later by logging in with the same name and password.	 သင်၏ စစ်တမ်းဖြေဆိုခြင်းအား ဤအမည်၊ စကားဝှက်တို့ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအမည်၊ စကားဝှက်တို့ဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်၍ ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။	 Details
Your survey will be saved using that name and password, and can be completed later by logging in with the same name and password.
သင်၏ စစ်တမ်းဖြေဆိုခြင်းအား ဤအမည်၊ စကားဝှက်တို့ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအမည်၊ စကားဝှက်တို့ဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်၍ ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Female	 မ	 Details
2018-03-01 18:11:45 GMT
Continue	 ဆက်သွားမည်	 Details
2020-10-12 17:15:47 GMT
Did Not Save	 မသိမ်းဆည်းခဲ့ပါ	 Details
Cancel	 ပယ်ဖျက်မည်	 Details
Either you have been inactive for too long, you have cookies disabled for your browser, or there were problems with your connection.	 သင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေသဖြင့် သို့မဟုတ် သင်၏ ဘရောင်ဇာတွင် Cookie အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် သို့မဟုတ် သင်၏ အင်တာနက် လိုင်းကျနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။	 Details
သင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေသဖြင့် သို့မဟုတ် သင်၏ ဘရောင်ဇာတွင် Cookie အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် သို့မဟုတ် သင်၏ အင်တာနက် လိုင်းကျနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Gender	 လိင်	 Details
Load unfinished survey	 မပြီးဆုံးသေးသည့် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအား ပြန်လည်ခေါ်ယူမည်	 Details
မပြီးဆုံးသေးသည့် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအား ပြန်လည်ခေါ်ယူမည်